Artist Brashi, Oiri Paint Brashi, Watercolor Paint Brush - Fontainebleau
Nanchang Fontainebleau Painting Zvishandiso Industrial Co, Ltd.
Nanchang Fontainebleau Painting Materials Industrial Co, ltd inogadzira kugadzirwa uye kutengesa kwebrushes mabhurashi, ayo anosanganisira watercolor / mafuta / acrylic / ekushongedza mabhurashi uye erunako mabhurasho. Ivo vane yavo brand- Goridhe Maple, yanga ichizivikanwa seimwe yeakanakisa emhizha pendi brashi brand muChina. Ivo vanopa ese ese maOEM sevhisi, zvakare inogona kukubatsira iwe kugadzira yako pachako brashi uye brand. Kunyangwe iwe uine data rebrashi, ipapo ivo vanogona kuigadzira, zvinoenderana nechikumbiro chako chekugadzira mabhurashi mazhinji akasiyana.
Vatangi vanotenga sei mvuracolor Artist kupenda mabhurashi? Aya anotevera mamwe ma parameter akakosha andakanyora muchidimbu pakutenga mabhurasho aya. Kutanga, chimiro chebrashi Kazhinji, brashi rakatenderera rinonyanya kushandiswa. Mazhinji acho anogona kuve akapatsanurwa, saka ini handizo pinda mune zvakadzama pano ....
Mhando dzemhando yepamusoro yekupenda mabhurashi atinowanzoshandisa mukupenda ndeaya anotevera: Rudzi rwekutanga ndeyakasikwa fiber, inova bristles. Kusanganisira bristles, mhumhi bvudzi, mink bvudzi uye zvichingodaro. Chikamu chechipiri chemakemikari fiber. Isu tinowanzo shandisa nylon. Bristles Nyowani artiest yekupenda bhurashi inotengwa kuti iite ...
Nezve fekitori, yakanga yamhanya pamusoro pemakore makumi matatu, ine ruzivo rwakawandisa mukugadzirwa kweapendi bhurashi.
Vimbisa iyo mhando
Iyo yepamusoro chigadzirwa mhando uye mhando manejimendi sisitimu inogona kuita nhumbi yakafanana neyakavimbisa sampuli.
OEM ine mhando yako
Isu tinopa sevhisi yeOEM kune mutengesi / mutengesi / mutengesi. OEM brand kudhinda pane mubato uye kurongedza zviripo.
Chikafu Giredhi Brashi Pane Keke
Big Brush Yekumashure Kupenda
Kupenda Pachiso Uye Muviri
Mini Brush PaGaraji Kits